Booliska Norway oo soo bandhigay muuqaalka iyo macluumaadka ninkii weeraray Masjidka… – Hagaag.com
26 Febraayo 2020 in National // Sarkaal ka tirsana al-Shabaab oo xiriir la lahaa weerarkii saldhigga Manda Bay oo la dilay…
Booliska Norway oo soo bandhigay muuqaalka iyo macluumaadka ninkii weeraray Masjidka…
Posted on 12 Agoosto 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Booliska dalka Norway ayaa soo bandhigay muuqaalka iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan wiil dhallinyaro cunsuri ah kaas oo weerar hubeysan oo fashilmay ku qaaday masjidka al-Noor ee deegaanka Bærun ee duleedka caasimadda Oslo.
Ninkan dhallinyarada ah ayay booliska magaciisa ku sheegeen Philip Manshaus, waxaana ay da`diisu tahay 21 jir. Waxa uu kasoo jeedaa qoys hanti leh, waxaana isaga qudhiisa lagu sheegay nin hantiile ah oo guri malaayiin krowner ah leh.
Philip ayaa inta uusan weerarka ku qaadin masjidka waxa uu qoraal kooban soo dhigay bar bulsho, isagoona ku qoray in uu taageersanaa falkii uu ku kacay Brenton Tarrant oo sannadkan horraantiisa isna masjid ku yaal dalka New Zealand weerar ku qaaday islamarkaana uu ku dilay 51 ruux.
Sidoo kale booliska oo baaris ku sameeyeen gurigiisa ayaa waxa ay ka heleen meydka gabar ay “walaalo” ahaayeen oo ay waalidkiis soo korsadeen taas oo kasoo jeeday asal ahaan dalka Shiinaha. Gabadhan ayaa lagu eedeynayaa in uu dilay ka hor inta uusan u dhaqaaqin dhanka masjidka.
Ujeedka weerarkan ayaa looga shakisan yahay fal cunsurinimo oo neceb ajaaniibta ah, waxaana falka weerarka ku dhaawacmay qof ka mid ahaa jameecada masaajidka Al Noor ee Bærum.
Sii hayaha xilka taliyaha ciidanka booliska magaalada Oslo, Rune Skjold ayaa wariyaasha u sheegay in weerarka masaajidka Al Noor Islamic Center ay booliska u arkaan iskuday weerar argagixiso. Wuxuu intaasi raaciyay in hordhaca baaritaannka ay boolisku wadaan uu muujiyay in ninka rasaasta ku furay masjidka uu uu u muuqdo inuu ka tirsanyahay dadka xagjirka ah ee kasoo horjeeda muhaajiriinta.
Ninka weerarka geystay oo ku hubeesnaa qori darandoori u dhaca ayaa masjidka deegaanka Bærum ee duleedka Oslo ku furay rasaas, balse waxaa hakiyay oo qorigana kula dhagay nin ka mid ah dadkii ku tukanayay masaajidka kaas oo ay boolisku sheegeen inuu soo gaaray dhaawac fudud.
R/wasaaraha dalka Norway Erna Solberg iyo masuuliyiin kale ayaa booqday goobta weerarku uu ka dhacay, waxaana ay dhammaantood wada cambaareeyeen falkan argagixisada ah ee lagu bartimlaameedsaday masjidka.
About Admin (8888 Articles)
Feeryahanad Soomaaliyeed oo guul weyn ka gaartay isreebreebka feerka Afrika ee loogu…